स्वास्थ्यमन्त्रीलाई थाहा नभएको पीपीई मासिक डेढ लाख आवश्यक, उपलब्ध १२ सयमात्रै
काठमाडौं, चैत १३ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बुधबार दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइमा मुलुक होमिएको छ। तर, तालुकदार मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री ढकालले संक्रमितको उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) भन्ने नै आफूले नबुझेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरसल बनिरहेको भिडियो चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरुसँग मन्त्री ढकालले भनेका छन्, ‘म त पीपीई भन्ने पनि बुझ्दिनँ। मनोविज्ञान कस्तो बन्यो भने अब पीपीईबिना घरमा भात पकाउन पनि खतरा हुन्छ भन्ने अवस्था आयो।’ उनको यो अभिव्यक्तिले महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोनासँग जुध्ने सरकारको तयारी र स्वास्थ्यमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल बनाइदिएको छ।
एकातिर स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई र माक्स नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भने गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले नबुझेको पीपीई नेपालमा कति छ त ? काठमाडौंप्रेसले खोजी गरेको तथ्य हेर्दा अवस्था भयावह देखिएको छ। यसले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले केबल लाज छोप्नकै लागि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि समेत हुन्छ। कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका र संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यो अवस्थामा नेपालसँग एक हप्तालाई मात्र पुग्ने पीपीई मौज्दात छ।
‘हामीसँग एक साताका लागि पुग्ने पीपीई छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा स्रोतले भन्यो,‘त्यो भनेको दुई हजार थान हो।’ देशभर करिब ६ हजार स्वास्थ्य संस्था छन्। ती स्वास्थ्य संस्थालाई मासिक रुपमा एक लाख ५० हजार पीपीई आवश्यक पर्छ। ‘दिनमा तीन सिफ्टमा संक्रमित बिरामी हेरिन्छ। यदि संक्रमण फैलिएमा एक महिनाका लागि डेढ लाखभन्दा बढी पीपीई आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
देशभर पीपीई अभाव भएपछि केही अस्पतालले आफैँ बनाउनका थालेका छन्। पाटन अस्पताल आफैँले पीपीई बनाउन थालेको छ। यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई पीपीई निर्माणका लागि अनुरोध गरेका छन्।
केन्द्रले अहिले चार सय थान पीपीई निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै, चौधरी फाउन्डेसनले वीर अस्पताल र वीर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. केदारप्रसाद सेन्चुरी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरालाई पीपीई हस्तान्तरण गरेको छ।
किटको अवस्था पनि उस्तै
कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको अवस्था पनि उस्तै छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग अहिले १२ सय मात्रै किट छ। चीनले बुधबार नेपाललाई दुई हजार किट दिएको छ। तर, त्यो किट आउने प्रक्रियामै छ।
अहिले नेपालमा रहेको किट संख्या करिब १२ सय मात्रै हो। एउटा किटले ९० जनासम्मको कोरोना परीक्षण गर्न मिल्छ। तर, खोलेपछि एक जनाको मात्रै परीक्षण गरेमा ९० जनाको परीक्षण गर्न पुग्ने किट खेर जाने विज्ञहरु बताउँछन्।
प्रयोगशालासँग दैनिक नौ सय जनाको परीक्षण गर्ने क्षमता छ तर अहिले दैनिक ५० देखि ६० जनाको मात्र परीक्षण भइरहेको सूचना अधिकारी राजेश गुप्ता बताउँछन्। चीनले दिएको दुई हजार र नेपालसँग भएको १२ सय किट जोड्ने हो भने नेपालसँग ३२ सय किट हुन्छ। सरकारले अब धरान, पोखरा र नेपालगञ्जबाट समेत कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। संक्रमण फैलिएको अवस्थामा देशभरबाट कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भए मासिक १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी किट आवश्यक पर्छ।
यस्तै, एक स्वास्थ्य संस्थालाई मासिक १० हजार थान मास्क समेत आवश्यक पर्ने महाशाखा स्रोतले जनाएको छ। आवश्यक सामग्री जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको महाशाखाले जनाएको छ। ‘अहिले विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यक सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले भने।
Published Date: Thursday, 26th March 15:26:45 PM